Ugu dambeyntii! Ka dib markii maqnaansho xilli 10 ee "NCIS: Los Angeles" Linda Hunt sameeyey laabto la yaab leh - Relay TELES
ACCUEIL » kale Ugu dambeyntii! Ka dib maqnaansho xilli-ciyaareedkii 10 ee "NCIS: Los Angeles", Linda Hunt waxay soo noqotaa soo noqnoqon cajiib ah
Ka dib maqnaansho dheer, Linda Hunt, oo ah jaceylka taageerayaasha, ayaa ku soo laabtay cajiib ah NCIS: Los Angeles. Maxaa ku dhacay nolosha waayeelka muddadan oo dhan?
Boostada ay wadaagaan NCIS: LA @ (@ncislaloving) on Mar 3, 2019 at 3: 59pm PST
Linda Hunt ayaa soo laabtay NCIS
Haddii aad nala mid tahay waxaad tahay taageere wayn NCIS: Los Angeles, waxaad hubaal noqon doontaa mid aan ku habboonayn middan cusub. cajiib The Linda Hunt wuxuu soo dhigay soo noqoshada cajiibka ah ee taxanaha oo ah xilligii ugu filnayd. Iska ilaali: Kufsadayaasha inay yimaadaan!
Linda Hunt, 73 sano jir, waa tiro weyn oo taxane ah NCIS: Los Angeles dhawr sano. Aktarka ayaa xittaa helay laba abaalmarin oo ah abaalmarinta xulashada dhalashada ee doorkeeda Hetty Lange.
Muuqaal ay soo saareen Maria Luisa Illarnizzi (@ marialuisa.illarnizzi) on Mar 14, 2019 at 1: 28pm PDT
Si kastaba ha noqotee, Linda Hunt waa inay seegto xilli oo dhan NCIS. Xaqiiqdii, inta lagu jiro xagaaga 2018, Linda wuxuu ahaa dhibane shil baabuur wuxuuna u baahan yahay in la dhigo isbitaal.
Hetty adeerable ayaa seegay taageerayaasha bandhigga badan. Ugu dambeyntii, Linda ayaa ku soo laabtay taxanaha ka dib markii ay maqnaayeen 10 oo dhan.
Xoogaa weyn ee soo laabashada Hetty! #NCISLAWedding #LindaHunt 😘 @DanielaRuah @ericcolsen @NCISLA @CBS https://t.co/NC1SrtMvhi pic.twitter.com/WgQErgVsFO
- Linda Hunt (@FCLindaSuanHunt) March 18, 2019
Waxaan rajeyneynaa inaan soo laabano Hetty! #NCISLAWedding #LindaHunt 😘
Hetty ayaa soo laabtay halyeey ah si loogu dabaaldego arooska Marty iyo Kensi. Dabeecaddiisa ayaa ka hadlayay dib u soo noqoshadiisa cajiibka ah:
Anigu keligay kama tagi karo xataa xitaa daqiiqo ****.
Boostada ay wadaagaan NCIS: LA @ (@ncislaloving) on Mar 18, 2019 at 1: 25am PDT
Waxaan aqoonsanahay halka aan jecelahay halkaa.
Hetty ayaa seegay taageerayaasha badan
Dabeecadda Linda Hunt ayaa seegtay taageerayaasha badan ee taxanaha xilli ciyaareedkan. Marka uu ku laabto NCIS, waxay muujiyeen farxad weyn.
Aad ayaan ugu faraxsanahay in Linda Hunt ay ku soo noqotay NCISLA. Waxaan sugayay walaac si aan u arko in dynamo dib u noqoto meesha ay ka tirsan tahay. Aad ayaan ugu mahadcelinayaa soo noqoshada. Waad ku mahadsantihiin, mahadsanid, mahadsanid.
- Vickie White (@vickielynnwhite) March 18, 2019
Aad ayaan u faraxsanahay in Linda Hunt ay ku soo noqotay NCISLA. Waxaan sugayay xasillooni darro si aan u aragno wadooyinkaas meeshan. Waan ku faraxsanahay inay caafimaadkeeda ku filan tahay inay ku noqoto taxanaha. Waad ku mahadsan tahay mahadsanid.
Waan ku faraxsanaa inay ka hadlaan Hetty caawa #NCISLA. Ma ahan koox kaliya oo daacad u ah. Hope Linda Hunt si fiican ayuu u bogsoonayaa, waxaana rajeynayaa in ay awood u leedahay inay soo noqoto.
- Ashley (@oceansshore) February 18, 2019
Waxaan ku faraxsanaa inay wax yar ka hadlaan caawa Hetty #NCISLA. Ma ahan koox kaliya oo daacad u ah isaga. Iyadoo la rajeynayo in Linda Hunt ay si fiican u soo kabato ayna rajeyneyso inay si dhakhso ah dib ugu soo laaban karto.
Bandhigyada habeenkii hore ayaa ahaa mid fantastik ah. Dhamaan qorayaashaada iwm. ayaa naga dhigtay qosol iyo uun ku riyaaqay xaalad xun. Iyo in Linda Hunt cajiib ah (Hetty) cajiib ahaa.
- eileen newton (@newtoneileen) March 18, 2019
Dhacdooyinka habeenkii ugu dambeeyay waxay ahaayeen kuwo cajiib ah. Jilayaasha, qorayaasha, iwm. waxaad naga dhigtay oohin iyo qosol iyo mahadsanid aad naloo daaweeyay si weyn. Xaqiiqda ah in Linda Hunt (Hetty) ay soo laaban karto, waxay ahayd cajiib.
LINDA HUNT !!!!!!! Soo noqo Oscar !!!!!#TheYearofLivingDangerously
- duurjoogta (@walkinglife) January 9, 2019
LINDA HUNT !!!!!!! Oscar !!!!! #TheYearofLivingDangerously
Aad ayaan ugu faraxsannahay in Linda Hunt ay ka fiican tahay oo diyaar u tahay in ay ku soo noqoto si ay u noqoto xilli ciyaareedka soo socda ee taxanaha guusha leh.
Senate-ka: Biilka Baadiyaha Batroolka ee doodda